Ihhovisi Lethikithi Lezokuvakasha Jenia Viaggi - I-Catania
I-ejensi Yokuhamba Yehhovisi Lamathikithi - ICatania
"Umhlaba uyincwadi, abangahambi bafunda iphepha elilodwa kuphela ..."
4.4 /5 amavoti (amavoti angama-7)
IHhovisi Lethikithi Lezokuvakasha, ePiazza San Placido 5 a Catania, kungcono 'Abezokuvakasha Nezokuvakasha. I-Tailor yenza amaphakheji wokuhamba, uhambo lokuvakasha, izinkambo eziqondiswa edolobheni nangaphandle kwedolobha. Ngaphezu kwalokho, kungumthengisi ogunyaziwe Ithikithi leViva ukuthengiswa kwe Amathikithi wemibukiso, umentshisi, yaseshashalazini namakhonsathi.
IHhovisi Lethikithi Lezokuvakasha eCatania - Isikhungo Sokuvakasha Nezokuvakasha
IHhovisi Lethikithi Lezokuvakasha, wazalwa ngoJanuwari 2015, evela kodadewethu abasebasha baseCatria abanothando olukhulu lomsebenzi omuhle kangaka. Inhloso yale nhlangano ukusiza amakhasimende ukuthi ahambe ngokuphepha nangaphandle kwezimanga ezingezinhle, ngenxa yokukhethwa kwemisebenzi ekhethiwe I-Tailor yenza amaphakheji wokuhamba, uhambo lokuvakasha, izinkambo eziqondiswa edolobheni nangaphandle kwedolobha. Umsebenzi we IHhovisi Lethikithi Lezokuvakasha, a Catania, iskena izindawo eziningi: kusuka kokulula Ihhovisi lesitimela lendiza nelitimela, kuze kube yinhlangano yemicimbi efana nemishado namaqembu alula. Ngabasebenzi bethu bezithombe nabahleli abazonakekela yonke imininingwane yemicimbi yakho.
IHhovisi Lethikithi Lezokuvakasha eCatania - Ihhovisi Lamathikithi eViva
IHhovisi Lethikithi Lezokuvakasha, a Catania, kunjalo nomthengisi osemthethweni we Ithikithi leViva, ingosi yokuthengisa nge Amathikithi wemibukiso, umentshisi, yaseshashalazini namakhonsathi. L'Inkampani yokulungisela abahambayo ICatania futhi ibhekana nokuvalelwa kwamakhonsathi, imibukiso, noma izinhlanga zamaqembu ezinkukhu, ene-Mercedes Vito enezihlalo eziyisishiyagalombili, nazo zonke izinhlobo zezithuthi ezitholakala, kusukela eBeetle kuya ePresident Limousine. Ihhovisi Lamathikithi eViva a Catania? Amathikithi ebhuku we Imibukiso, Imidlalo, imidlalo yaseshashalazini namakhonsathi da IHhovisi Lethikithi Lezokuvakasha!
Ihhovisi Lethikithi Lezokuvakasha eCatania - Izinsiza Eziningi Ezihlinzekiwe kanye Namaphakeji
IHhovisi Lethikithi Lezokuvakasha, 'Abezokuvakasha Nezokuvakasha, esisenkabeni yomlando, a Catania. Ngenxa yokusondela kwayo kwiPiazza Duomo, sibhekana nezokuvakasha kanye nokuvakasha hhayi nje ngokuthengisa kokuhamba. Sakha amaphakheji enziwe ngezinto ezenziwe kahle kanye nama-Guided Tours kuwo wonke umhlaba, kepha ubuhlakani bethu yikho Okuzayo. IHhovisi Lethikithi Lezokuvakasha ukuhlela Uhambo nsuku zonke oluya eSicily. Ubuhle balolu hambo yintengo engabizi, nethuba elihle lokuhambela izindawo eziningi enkampanini yabantu abaningi. Kusuka ephathini le-stag / hen kuya ekhefini lezithandani !! L 'IHhovisi Lethikithi Lezokuvakasha hlela izikhathi zakho zokungcebeleka, ngemibono eminingi namaphakheji enzelwe abasanda kushada! Uhlu lomshado, kodwa hhayi kuphela. Izinsuku zokuzalwa, imishado, iziqinisekiso nokuningi, kuzokunikeza iholide.
IHhovisi Lethikithi Lezokuvakasha eCatania - Live, Uthando, Ukuhamba
IHhovisi Lethikithi Lezokuvakasha, e Via San Placido 5 a Catania, kungcono 'Abezokuvakasha Nezokuvakasha. I-Tailor yenza amaphakheji wokuhamba, uhambo lokuvakasha, izinkambo eziqondiswa edolobheni nangaphandle kwedolobha. L 'Inkampani yokulungisela abahambayo di Catania inikeza izinsizakalo eziningi: kusuka ehhovisi lamathikithi omgwaqo asemanzini nasololiwe, enhlanganweni yemicimbi efana nemishado namaqembu. Ngaphezu kwalokho, kungumthengisi ogunyaziwe Ithikithi leViva ukuthengiswa kwe Amathikithi wemibukiso, umentshisi, yaseshashalazini namakhonsathi. Isikhungo Sokuvakasha eCatania? Themba ubuchwepheshe beHhovisi Lamathikithi Okuhamba Kwezokuvakasha!
Ikheli: UPiazza San Placido, 5
Ucingo: 095 7150493
Umakhala ekhukhwini: 347 1648794
Umakhala ekhukhwini: 344 2056061
Inombolo ye-VAT: 05186050877